छोरालाई जन्मदिएकि ३० वर्षीया डम्बरी, जन्मिदै टुहुरो पारेर आफै यो सँसारबाट विदा भइन्! – PathivaraOnline
Home > Uncategorized > छोरालाई जन्मदिएकि ३० वर्षीया डम्बरी, जन्मिदै टुहुरो पारेर आफै यो सँसारबाट विदा भइन्!
छोरालाई जन्मदिएकि ३० वर्षीया डम्बरी, जन्मिदै टुहुरो पारेर आफै यो सँसारबाट विदा भइन्!
admin November 12, 2020 November 12, 2020 Uncategorized	0
डोटी – उच्च रक्तस्रावका कारण जिल्लाको दिपायल सिलगढी नगरपालिका–४ कुमालीकोटकी ३० वर्षीया डम्बरीदेवी साहु कठायतको मृत्यु भएको छ । चार दिनअघि दिपायलको राजपुरमा रहेको सुजङ्ग अस्पतालमा सामान्यरूपमा शिशुलाई जन्म दिनुभएकी उहाँको र’क्तस्रा’व नरोकिएपछि उक्त अस्पतालले सेती प्रादेशिक अस्पताल सिफारिस गरेको थियो । प्रादेशिक अस्पतालमा समेत उपचार गर्दा र’क्तस्रा’व नरोकिएका कारण उहाँको मृत्यु भएको हाे ।
स्थानीयवासी योगेन्द्र कठायतले दिएकाे जानकारी अनुसार डेलिभरीका लागि प्रादेशिक अस्पताल लगिएकि डम्बरीकाे उपचारकै क्रममा अत्यधिक र क्तश्रा व भएकै कारण मुत्य भएकाे बुझिएकाे छ । उहाँले जन्माउनुभएको नवजात शिशुको अवस्था सामान्य रहेको चिकित्सकले जनाएका छन् । मृतकका दुई छोरी तथा एक चार दिनको छोरा छन् । मृतकको बुधबार नै अन्त्येष्टि गरिएको घरपरिवारले जनाएको छ ।
यो पनि : पिसीआरको नक्कली रिपोर्ट बनाउने पक्राउ
बिहानै कलंकीमा भयङ्कर दुर्घटनाः तीन जना घटनास्थलमै ठहरै…
राति साथीको कोठामा गएकि किशोरीलाई १२ जनाले बला**त्कार गरेर भिडियो बनाए भाईरल